Public Health in Myanmar: C-Box အမေးအဖြေ (၂)
စီဘောက်ကိုဝင်လို့မ၇လို့ ...ဒီကနေတဆင့်မေးခွင့်ပြုပါနော်.....မလေးမစားဖြစ်သွားခဲ့၇င်လည်း...တောင်းပန်ပါတ၇်နော်....ခါးအကြောညပ်တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးသိချင်လို့ ပါ...
ပထမဆုံးဖြစ်ဖြစ်ချင်းစက်နဲ့သွားဆွဲတ၇်..သက်သာလာတ၇်ပေ့ါနော်.......အခုပြန်ဖြစ်တော့..အနင်းခံလိုက်တာ..မသက်သာပဲပိုဆိုးသွားတ၇်...ထိုင်လည်းနာ..ထလည်းနာ..လမ်းလျှောက်လည်းနာနေလို့ ပါ......အဲ့ဒါဘ၇်လိုလုပ်၇မ၇်ဆိုတာလညါး..အကြံပေးဖြေကြားပေးပါနော်.......မဆင်ခြင်ပဲလျှောက်လုပ်လို့ ..ပိုဆိုးလာတာကိုစိတ်ဆိုးပြီးမဖြေပဲနဲ့တော့
ကျွန်မ ရာသီမလာတာ သုံးလခွဲလောက်ရှိပါပြီ၊၊ အရင်ကလည်း မကြာမကြာ ( တခါတလေ2လခွဲလောက်ထိ ) နောက်ကျဘူးပါတယ်၊၊ ဒါပေမဲ့အခုလောက် တစ်ခါမှ နောက်မကျဘူးပါ၊၊ ရာသီလာနိုး၊ လာနိုးနဲ့ စောင့်နေတာ အခုလောက်ထိကြာသွားတာပါ၊၊ ဆရာဝန်တော့ မပြဖြစ်သေးပါဘူး၊၊ ကျွန်မကြောက်တာက ဗိုက်ထဲမှာ တစ်ခုခုဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ ပါ၊၊ စိုးရိမ်ရပါသလားရှင်၊၊ လက်ဖက်တွေ အစားများသွားလို့ လားမသိပါဘူးရှင်၊၊ တခါတခါ ရာသီလာချင်သလိုလို ခံစားရပြီး မလာတာပါ၊၊ အစကတော့ နဲနဲနောက်ကျတာကောင်းတယ်လို့ ထင်နေတာ အခုတော့တော်တော်နောက်ကျနေလို့ စိုးရိမ်လို့ပါရှင်၊၊ ဆရာမဆီက အဖြေကိုစောင့်နေ ပါမယ်ရှင်၊၊
ညီမရေ အိမ်ထောင် ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ သန္ဓေတားထားပေမဲ့ တခါတရံ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ် မတော်တဆနဲ့ ရသွားတတ်လို့ ကိုယ်ဝန်ရှိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်မရှိဘဲနဲ့ သွေးမပေါ်ဘဲ ဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းအရင်းကလည်း အမျိုးမျိုးရှိတော့ ညီမပေးထားတဲ့ အချက်အလက်လောက်နဲ့ ဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ စိုးရိမ်ရလားဆိုတော့ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရင်း အပေါ်မှာသာ မူတည်ပါတယ်လို့ပဲ ပြောလို့ရမယ်။ ဘာကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတော မသိဘဲနဲ့ ပြောဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဟော်မုန်းမျှတခြင်း၊ အာဟာရမမျှတခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း တခုခုကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အရင်ကလည်း မကြာခဏ ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဓမ္မတာမမှန်တာက သေချာနေလို့ အလေးအနက်ထားပြီး ဘာကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရှာဖွေစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်နေပါစေ အကျိုးအကြောင်းကို စောစောသိတာက နောက်ကျမှ သိတာထက် အများကြီး ကုသဖို့ (သို့) ကာကွယ်ဖို့ ပိုအချိန်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသ စစ်ဆေးပြီး အကောင်းဆုံးပဲလို့ အကြံပြုပါတယ်။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊၊ ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီအပါတ်ထဲမှာ ဆရာဝန်ဆီသွားပြလိုက်ပါ့မယ်၊၊ ရာသီလာရင် တော်တော်ကိုက်ခဲတတ်လို့ ရာသီနောက်ကျတာ ကောင်းတယ်ဆိုပြီး လာခါနီးရင် လက်ဖက်တွေစားတာ များသွားလို့ဒီတခါ ဒါ့ကြောင့်လားတော့ မသိပါဘူး ဆရာမရယ်၊၊ ( ဆိုင်မဆိုင်တော့မသိပါ၊၊) ဆရာမ အကြံပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါရှင့်၊၊
OG ဆရာဝန် နဲ့ပြပါတယ်.. ဆရာမက NOSIC, Multi-Vitamin, Folic Acid သောက်ဖို့ ညွှန်ကြားပါတယ်ဆ၇ာ..
သမီး တစ်ခုသိချင်တာက Ovimin အားဆေးကို ကိုယ်ဝန်ဘယ်နှစ်လမှာ စသောက်လို့ရလဲဆိုတာရယ်..
Multi-Vitamin နဲ့ တွဲသောက်လို့ရမရသိချင်လို့ပါ..
To Hazel: ကိုယ်ဝန်ဆောင် အားဆေးတွေကို စောပြီး သောက်နိုင်လေ ကောင်းလေပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်ရင့်လာရင် ပိုလိုလာတယ်။ ပိုလိုတာက သံဓါတ်နဲ့ ဖေါလစ်အက်စစ် ဖြစ်တယ်။ လူတိုင်း သောက်ရင် ကောင်းတဲ့ ဗီတာမင် ဘီ အပြင်ပေါ့။ ထပ်လိုသေးတာက (ကယ်လ်စီယံ)။ ဆေးကုပ္မဏီတွေကလဲ ရောင်းကောင်းအောင် ဆေး အမျိုးမျိုးကို ကြော်ညာ ကောင်းကောင်းနဲ့ ထုတ်တယ်။ “ထောပတ်ကောင်း စလောင်းနှင့်တည်” ဆိုသလို အကောင်းကို ဘာနဲ့ ထည့်ထည့် ကောင်းတာဘဲပေါ့။ သံဓါတ်ရော၊ ဗီတာမင်ပါ ရောထုတ်တာလဲ ကောင်းပါတယ်။ Prenatal capsule ဆိုပြီးလဲ ထုတ်တယ်။ ဘယ်ဆေးမဆို ထုတ်လုပ်တဲ့ ဆေးကုပ္မဏီနာမည်ရှိတာကို ရွေးစေချင်တယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေက လူလည်ကြီးများဟာ နာမည်ရှိပြီးသား ဆေးတွေကို ပုံမှားရိုက်နေကြတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က ညံ့နေသေးတော့ ခံနေကြရတာပေါ့ဗျာ။
ANC (Antenatal Care) ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်ခြင်း ကိုလဲဖတ်စေချင်ပါတယ်။
??????? ???????? (??)???????????..
?????????????????????? ??????????????????????? ????.. ??????????????????????????????????????..
??????????????????????????????????? ??????? ?????????..
OGပြပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု့ကိုခံယူပါတယ်ဆရာ. အခုအပူရှပ်ပြီး ချောင်းတွေဆိုးပါတယ်ဆရာ.. နောက် အာသီးလည်းရောင်နေပါတယ်ဆရာ.. အရင်ဆို ပိုးသတ်ဆေးသောက်လိုက်တယ်ဆ၇ာ..အခုတော့ မသောက်ရဲဘူး..ဗိုက်ထဲက ကလေးကိုထိခိုက်မှာဆိုးလို့ ပါဆရာ.. ဘာဆေးသောက်သင့်တယ်ဆိုတာ.. ဆရာ အကြံပေးဖြေကြားပေးပါအုံးဆရာ..ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
Amoxicillin ဆေးဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံး သောက်နိုင်တဲ့ဆေးလို့ အားလုံးလောက်က ယူဆပါတယ်။ သုတေသနတွေ ဆက်လုပ်နေတာမှာ Pregnancy Risk Category B (considered to be safe for use during pregnancy) အဆင့် ရှိတယ်။ Allergy မဖြစ်သူတွေ ကိုယ်ဝန်ရော ကလေးနို့တိုက်ချိန်မှာပါ သောက်နိုင်တယ်။
ဆရာခင်ဗျာ လိင်ဆက်ဆံပြီး ကိုယ်ဝန်မရှိအောင်ပြုလုပ်ရင် မိန်းခလေးအတွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိမရှိသိချင်ပါသည်။
ကျွန်တော့်ကို မေးတာဆိုရင်တော့ -
ဒီ (ဆိုက်) က ကိုယ်ပိုင်လဲမဟုတ်၊ စာဖတ် ပရိတ်သတ်လည်း အားနာလို့ ဒီခေါင်းစဉ်ကို မတင်ချင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ -
ကို လာဖတ်နိုင်ပါတယ်။ မေးထားတာမျိုးတွေ အများကြီး ရေးထားပါတယ်။
chit myooo said...
aye cho said...
ကျွန်တော်က နိုင်ငံခြား off shore တစ်ခုမှလုပ်နေတာ ပြီခဲ့တဲ့တစ်လလောက်က စပြီး ကျွန်တော်ဆီးခုံတင်းတင်းနေတယ် အပေါ့သွားချင်အမြန်သွားမှ မသွားရင်အောင့်တယ် မြန်မာပြည်ခွင့်ပြန်လို ဆေးစစ်ကြည့် တယ် သွေး,ဆီး,Ultrasound စစ်ကြည့်တယ် ထူးထူးခြားဖြစ်တာမတွေ့ရဘူး ခွင့်ပြည့်လိုပြန်လာတော့ အရင်လိုပဲ ဆီးခုံကတင်းနေတယ် ဆီးသွားလိုက်မှပဲ နည်းနည်းသက်သာတယ်ဆရာ ကျွန်တော်ဘာလုပ်သင့်လည်းဆရာ